2018 China iraba imishini ukuthuthukiswa - China Qingdao Imishini esimile
Kusukela bottoming out ngo-2016, iraba imishini umkhakha China sathuthuka e 2017, ne-idijithi double ukukhula yokuthengisa izimali, ukukhuphuka kwezinga ukuthekelisa nomholo, kanye nokwanda okuphawulekayo inzuzo yezinkampani. Ngokusho Abangaphakathi embonini, izinkampani isondo basekhaya nabamazwe angaphandle ukukhuthalele ukutshala imali, futhi sikhulu kakhulu isidingo iraba imishini, ikakhulukazi ephezulu ukucacisa iraba ohlakaniphile imishini, liyathuthuka. Kulindeleke ukuthi iraba imishini umkhakha China ngeke ngokusemthethweni faka isiteshi phezulu e 2018.
Rubber imishini amabhizinisi 'yokuthengisa izimali anda kakhulu
Ngokwezibalo injoloba imishini amalungu zochwepheshe China Chemical Izinsiza kusebenza Association, e-2017, angu-24 ezinkulu amabhizinisi iraba imishini yonkana izwe izuzwe yokuthengisa ngemali 7,735 bhiliyoni yuan, ukwanda kokungabi 11.3%. Ngu Isifaniso, inani yokuthengisa izimali injoloba imishini umkhakha China e 2017 kulindeleke ukuba sifinyelele 10,65 bhiliyoni yuan, ukwanda kokungabi 10.9%. Lona oneminyaka engu-on-nyaka ukwanda kuqala umkhakha yokuthengisa izimali kusukela 2015.
Ngo-2017, i-jikelele yokusebenza izinga injoloba imishini amabhizinisi China kwakuhunyushwa okusezingeni eliphezulu, kanye nenzuzo yokuthengisa kwamabhizinisi kakhulu lenyuka. Phakathi izinkampani 24 okwaxoxwa nabo, kwakukhona 15 ukukhula yokuthengisa izimali, 8 ukwehla, futhi phezulu 10 yokuthengisa izimali babe 6,54 bhiliyoni yuan, accounting for 61,4% wenani yokuthengisa imali, umkhakha lokuhlushwa kunyuke ngo-0.7%. Namandla.
Kuyaphawuleka sithuthukiswe inzuzo
Awugcinanga yokuthengisa izimali izuzwe ukukhula eningi, kodwa okusiza iraba imishini umkhakha China futhi ikhuphuke kakhulu e-2017 uma kuqhathaniswa ne ngonyaka odlule, kanye nokwenza inzuzo imboni ikhuphuke kakhulu.
Kuyaqondakala ukuthi 24 iraba imishini amabhizinisi konke okwenza inzuzo omuhle, futhi akhawunti inzuzo ukukhula amabhizinisi ngoba iningi. Ikakhulu, i-inzuzo efakwe ohlwini iraba izinkampani imishini iye yathuthuka kakhulu. Ngokwesibonelo, ngo-2017, inkampani lifinyelele inzuzo abacishe babe yizigidi ezingu-93 yuan, ngenkathi ngo-2016 kwaba ukulahlekelwa kwezigidi ezingu-770 yuan.
Ngokusho umkhakha abahlaziyi, amandla ukushayela ekukhuleni inzuzo ngokuyinhloko ukwanda oda kanye nekwentiwa ncono umkhiqizo wekhasi okwedlulele. Nokho, kuyafaneleka ukuthi intengo izinto zokusetshenziswa imba eqolo, okuye kwanciphisa inzuzo engenayo.
Izinto ezithunyelwa kwamanye amazwe kwamanye amazwe ikhuphuke kakhulu
Ngokwezibalo, e-2017, inani ukuthekelisa ukulethwa 24 iraba imishini amabhizinisi eChina 1,836 bhiliyoni yuan, kuze 32,3% ngonyaka-on-nyaka. Ngu Isifaniso, kulinganiselwa ukuthi inani ukuthekelisa ukubaluleka iraba imishini umkhakha China sizofika US $ 360 million ngo-2017, eneminyaka engu-on-nyaka ukwanda of 20%.
Ngokusho umkhakha abahlaziyi, ukukhula ezimakethe zangaphandle ezivela ukuthekelisa ngokuyinhloko ngenxa yokuthi izinkampani isondo China zisabele US "ukuphikiswa double 'wamisa isondo izimboni e-United States futhi mpumalanga ye-Asia. Isidingo iraba imishini ubumbe emvuthwandaba encane. Njengamanje, entshisekweni izinkampani isondo China sika ukwakha izimboni kwezilwandle uyaqhubeka lwalungabola. Ngokwezibalo wokulungiselela, amaphrojekthi isondo ezingaphezu kwezingu-10 ayaqala noma uhlela ukuqala. Ngaphezu kwalokho, i-international isondo emakethe utshalomali uqinile, futhi kukhona imisebenzi isondo utshalomali e-Continental futhi Bridgestone, nakho kubeka isisekelo nokukhishwa iraba imishini e China. Imboni ulindele ukuthi China iraba imishini nokuthengiswa kuzoqhubeka kuthuthuke ku 2018, kanye nezinga jikelele uzobe ngcono.
isikhathi Iposi: Aug-24-2018